श्रीमान हुन् त यस्तो! अहोरात्र २५ बर्षिय बिरामी श्रीमतlको स्याहारमा खटेर यस्ताे गरेपछि (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > श्रीमान हुन् त यस्तो! अहोरात्र २५ बर्षिय बिरामी श्रीमतlको स्याहारमा खटेर यस्ताे गरेपछि (भिडियो सहित)
श्रीमान हुन् त यस्तो! अहोरात्र २५ बर्षिय बिरामी श्रीमतlको स्याहारमा खटेर यस्ताे गरेपछि (भिडियो सहित)
admin January 23, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमाडौँ – बाहिर हेर्दा जति राम्रो देखिए पनि आजभोली निकै खोक्रो बन्दैछन्, वैवाहिक सम्बन्ध । निकै भलादमी देखिने पुरुषहरू पनि घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुदाँहुँदै बाहिरी सम्बन्धमा रहने, श्रीमती र छोराछोरीलाई दुःख दिने, कुटपिट गर्ने, यातना दिने गरेका घटना आजभोली दिनहुँ जसो बाहिर आइरहेका छन् । यद्यपि बाहिर आएका घटना एकाध मात्रै हुन् । दोब्बर, तेब्बर घटना भित्रभित्रै लुकाइन्छन् । इज्जतको डरले बाहिर ल्याइदैनन् ।
तर गुल्मी धुरकोट, पिपलधार घर भएका विनोद खड्का भने एउटा यस्ता उदाहरणीय श्रीमान् हुन्, जसले श्रीमान् हुनुको महत्व र कर्तव्य दुवै कुरा प्रमाणित गर्दैछन् । विवाहको मण्डपमा अग्नीलाई साक्षी राखी, सात फेरा घुमेर, सात जन्म संगै हुन गरेको कबुल अनुसार निर्देशित छन् । उनलाई देख्ने जो कोहीले भन्छन्, ‘श्रीमान् हुन् त यस्तो ।’
२०७२ सालको बैशाख २४ गते विनोद र अनिता वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिए । त्यो मागी विवाह थियो । विनोद अहिले २७ वर्षका भएभने अनिता २५ वर्षकि । उनीहरूको वैवाहिक जीवन राम्रोसंग चलिरहेको थियो । हाँसी खुसी थिए । विहेको २ वर्षपछि छोरी आहानाको आगमनले उनीहरूको खुसी झन् बढ्यो ।
तर अनिताकाे जीवनमा एकस्मात बज्रपात पर्यो । एक्कासी विरामी परेकि अनिताकाे नेचुरूलपेथी अस्पतालमा भर्ना भइन । शुरूमा २८ किलाे मात्रै भएकाे र अहिले विस्तारै हाइड्राेथेरापी, फिजियोथेरापी, अँकुपँक्चर तथा याेगाहरूका माध्यामबाट विरामीहरूलाइ निकाे बनाउने अस्पतालकि नर्स बताउँछिन् ।
अनिता जीकाे मानसिक रूपमा असक्त, शरिरका भागहरू नै नचल्ने अनिता यतिबेला बोल्ने हाँस्ने गर्न सक्छिन् । यसमा अस्पतालकाे बाहेक विशेष उदाहरणिय कार्य गर्ने अनिताकै श्रीमान हुन् । अस्पतालके नर्सहरूले समेत उनकाे खुलेर प्रशँसा गर्न पनि थाक्दैनन् । अहिलेकाे जमानामा यस्तो श्रीमान पाउनु अनितकाे लागि अहोभाग्य हाे भन्दा फरक पर्दैन । २४ सै घण्टा श्रीमान विनोद यसरी श्रीमतिकाे उपचारका लागि सहयोग गर्न खटिइरहनुभएकाे छ ।
निसन्तान दम्पतिहरूले मागेकाे सन्तान दिनुहुने दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन गराैं…
बिहिबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम
११ वर्षमा बच्चा जन्माएकी भावनाले सुनाईन् नयाँ स्कुलको अचम्मको अनुभव – भिडियो